Jaalala Archives - Ibsaa Jireenyaa
December 2, 2019 Sammubani One comment
Bismillah jechuun dubbii kiyya banee
Gargaarsa Mawlaa abdadhee kunoo karaa bu’ee
Zinaan karaan isaa badee hin qabu faaydaa
Itti hin kalaayinaa miidhaan isaa guddaa
Tooftaa ittin of eegdanii kunoo asirraa baradhaa
Hojii irra oolchuf carraaqaa gargaarsa Rabbiin kadhaa
Amma haa jalqabnu
Walumaan haa barannu
Kitaaba buusuf: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/12/zinaa-irraa-akkamitti-of-eeganii.pdf
August 17, 2018 Sammubani Leave a comment
Sab-qunnamtii irratti saalli lamaan waliin haasawuun khalwaa dhowwamee keessaa ta’uu danda’aa?
Yeroo ammaa karaan dhiiraa fi dubartiin itti wal qunnaman salphataa dhufee jira. Teknolojin gadaa kanaa kana salphisuun gahee ol’aanaa taphataa jira. Sab-qunnamti (social media) yommuu jennu karaa namoonni salphatti odeefannoo wal jijjiraniidha. Fakkeenyaf, Kan akka fesbuuki, WhatsApp, viber, telegram, Yahoo, email fi kkf. Read more
Ji’oota darban keessa waa’ee Rabbii ilaalle turre. Rabbiin beeku fi Isatti amanuun jireenyi teenya akka fooyyoftuu fi daandii sirrii qabattu taasisa. Yeroo dargaggumma fi shamarrummaa ibidda fedhii cimaa keessa namaatti qabatu Rabbiin beeku, itti amanuu, sodaachuu fi Isa jaallachuun akka qabbanaa’u muxannoo fi qorannoon ni agarsiisa. Warroonni Rabbiin beekanii fi itti bulan ibidda kanarraa nagaha akka bahan shakkii wayitu hin qabu. Warroonni Rabbiin irraa fagaatan immoo ibidda fedhii kanaan gubataa akka jiran hundii keenyaa ni beekna. Mee karaalee ibidda fedhii irratti ittiin obsan muraasa haa ilaallu. Karaan kuni warraa obsa qabaniif obsi akka cimuuf, warra obsa hin qabneef immoo obsa akka horatanii fi ibidda fedhii hir’isaniif agarsiistu isaaniif ta’a. Read more
April 18, 2018 Sammubani Leave a comment
Ani shamara maatii beekkamaa irraa taatedha. Akkuma namoonni ragaa bahan ani nama amantii qabatee fi amala gaarii qabuudha. Garuu dargageessa tokko baruuf sababa na kakaase hin beeku. Balaa abbaan isaa du’uutin waan rukutamee fi itti-gaafatamummaan obboleeyyani fi haadha horachuu isarratti waan kufeef isa gargaaru barbaade. Dargaggeessi kuni karaa hiriyyoota badaa qabate. Anis isa nan gorse. Isa cinaa dhaabbachuu fi dhugaan isa gorsuun dirqama kiyya akka ta’e natti dhagahame. Dhumarratti, gara barnoota isaatti ni deebi’e, hiriyyoota badoo ni dhiise, guutumaan guututti ni jijjirame. Read more